Mbanye ngwa mmekọrịta faịlụ maka kọmputa ga-enweta nnukwu mgbanwe | Gam akporosis
Drive faịlụ mmekọrịta ngwa maka kọmputa na-enweta nnukwu mgbanwe
Ọ bụrụ n’ịji Google Drive, ohere ga - abụkarị ị gafere ọtụtụ malfunctions, ngwa nke na-arụ ọrụ mgbe ọ chọrọ, otu o si chọọ ya, na Google dị ka agbahapụla kpamkpam na nke mere ka ọtụtụ ndị ọrụ kwụsị iji ya (gụnyere m onwe m).
Ọrụ nchekwa Google Drive na-eme ka ndị ahịa ya nweta ya abụọ mmekọrịta ngwa nwere arụmọrụ dị iche iche. Ngwa Ndabere na mmekọrịta Ezubere ya maka ndị ọrụ njedebe ma ọ bụ ọrụ maka ịmekọrịta faịlụ niile dị na kọmputa anyị na igwe ojii.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ngwa ahụ Njikwa mmiri, mbipute diji zụọ ahịa ndị ahịa nke Google. Ngwa a, kama ibudata faịlụ niile sitere na igwe ojii ma debe ha ka ha mekọrịta ha oge niile, na-enye anyị ohere ịnweta faịlụ ahụ, nke mgbe ịpị ya imeghe ya, budata ya n'oge ahụ ma nye anyị ohere idezi ya.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere budata ebe nchekwa dị na kọmputa anyị ọ bụrụ na anyị bu n'obi ịrụ ọrụ na-enweghị njikọ intaneti, ya mere a ga-edozi nsogbu nwere ike ibilite n'ọnọdụ ndị a.
Google ekwuwaala mbipute maka ndị ahịa azụmaahịa ga-abụ nke na-anọchi nke ugbu a dị maka ndị ọrụ ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, edegharịrị aha ụlọ ọrụ ahụ, site na Faịlị Stream gaa Drive maka kọmputa. A na-eme atụmatụ mgbanwe a maka ọkara mbụ nke 2021.
Versiondị mbanye maka ndị ahịa Google na-arụ ọrụ otu ụzọ ahụ Dropbox na Outlook na-eme ugbua ma ha na-enye ya ndị ọrụ niile ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ. Site na nke a, anyị ga na-enwekarị faịlụ anyị niile echekwara n'igwe ojii na-enweghị ibudata ya na kọmputa anyị, n'agbanyeghị na anyị achọghị ya n'ọtụtụ ọnọdụ, na-enwe ya oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Drive faịlụ mmekọrịta ngwa maka kọmputa na-enweta nnukwu mgbanwe
Xiaomi na-enye echiche nke ekwentị n’enweghị ọdụ ụgbọ mmiri na ihuenyo n’akụkụ anọ
MIUI 12: Otu esi belata ngwa